लोक सेवा परिक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित यि पाँच प्रश्नहरु (उत्तरसहित ) « Nijamati Khabar
उत्तर : नेपालको संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको अनुगमन तथा धारा २९४ मा वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ,
जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ;
– संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन :
संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन,
नेपालको संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । यसप्रकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, माथि जे भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम–कारबाहीको सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
प्रश्न : समावेशीकरणका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर : राज्य संयन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व एवम् सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । समावेशीकरणको प्रमुख क्षेत्र राजनीति हो । राजनीतिक पार्टीको पार्टीगत पद, जनताबाट निर्वाचन हुने पद जस्तै : सांसद एवम् मन्त्री पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
यसमा तोकिएका वर्ग, समुदायलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । योबाहेक समावेशीकरणका अरू क्षेत्र निम्न छन् ;
– सामाजिक क्षेत्र :
– शैक्षिक क्षेत्र :
प्रश्न : पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ हो । उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर : राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम–कारबाही, साधन–स्रोत एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णयहरू जनअपेक्षाअनुरूप हुन पुग्छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढ्छ । स्रोत–साधन अवसरको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सरकारले विगतमा के गरेको छ, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दै छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्दछन् र सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन् ।
जनताको निगरानी र बढ्दो चासोले सरकारी काम–कारबाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुन पुग्दछ । सेवाग्राही एवम् उपभोक्ताका अधिकारहरू स्थापित हुँदै जान्छन् । यसबाट समग्र शासन प्रणाली सुदृढ र जनमुखी हुन पुग्दछ ।
जस्तै : कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्य व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपन ल्याउन सहयोग गरेको छ । सूचना अधिकारीको व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहज पहुँच बढाउन मद्दत गरेको छ । कार्यालयको आय, व्यय, आर्थिक कारोबारलगायतका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहयोग गरेको छ । त्यसैले पारदर्शितालाई सुशासनको आधार स्तम्भ हो भन्न सकिन्छ ।
प्रश्न : उत्प्रेरणाको अर्थ स्पष्ट गर्दै उत्प्रेरणा बढाउने उपायहरू विवेचना गर्नुहोस् ।
उत्तर : मानिसमा भएको अन्तरनिहित क्षमतालाई उजागर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य उत्प्रेरणा हो । यो मानव साधनसँग सम्बन्धित छ । यसले मानिसमा हुने निष्क्रिय गुणलाई सक्रिय गुणमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ । यो एउटा इच्छाशक्ति हो, जसले व्यक्तिविशेषलाई कार्यप्रति उन्मुख गराउँदछ । मानिसमा उत्प्रेरणा जागृत गर्न मौद्रिक र गैरमौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ ।
उत्प्रेरणा बढाउने मौद्रिक उपाय:
उत्प्रेरणा बढाउने गैरमौद्रिक उपाय:
– पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्यसम्पादनसँगआबद्ध गर्ने, बिदाको व्यवस्था गर्ने ।
प्रश्न : सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ अनुसार मुलुकको प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले के–कस्ता नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर : प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा ७ मा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवम् समय–समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ;